Countertops vato quartz maoderina APEX-5112
Lakozia fotsy madio misy countertop quartz APEX-6601...
Ny tombony azonay vato quartz super fotsy APEX ...
Vato quartz avo lenta amidy APEX-6608
Quartz Stone dia tena be mpampiasa ho an'ny countertop, lakozia ambony, vanity ambony, latabatra ambony, lakozia nosy ambony, efitra fandroana, dabilio ambony, bar ambony, rindrina, gorodona sns Ny zava-drehetra dia customizable.Mifandraisa aminay azafady!
Alefaso mailaka aminay WhatsApp
Ny vokatra rehetra dia eo ambany fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao.Manome toky anao izahay fa vokatra tsara sy tsara ny atolotray.Hatramin'ny niandohan'ny famokarana ka hatramin'ny fisafoana ny entana vita, dia mandinika ny antsipiriany rehetra izahay ary miezaka mafy mba hisorohana ny fahadisoana rehetra.Ny vokatra rehetra dia eo ambany fanaraha-maso hentitra momba ny kalitao.
Manome toky anao izahay fa vokatra tsara sy tsara ny atolotray.
Hatramin'ny fiandohan'ny famokarana ka hatramin'ny fisafoana ny entana vita,
mandinika ny antsipiriany rehetra izahay ary miezaka mafy mba hisorohana ny fahadisoana rehetra.
Ny orinasanay dia manana tsipika famokarana mandeha ho azy roa, ka ny famokarana ny haben'ny jumbo sy high fahombiazana no tombony ho antsika.
1. Ny hamafin'ny avo: Ny hamafin'ny Mohs ambonin'ny tonga amin'ny ambaratonga 7.
2. High compressive hery, avo tensile hery.Tsy misy fotsy, tsy misy deformation ary tsy misy triatra na dia taratry ny masoandro aza.Ny endri-javatra manokana dia mahatonga azy io ho ampiasaina betsaka amin'ny fametrahana gorodona.
3. Low fanitarana coefficient: Super nanoglass dia afaka mitondra ny mari-pana isan-karazany avy amin'ny -18°C hatramin'ny 1000°C tsy misy fiantraikany amin'ny rafitra, loko ary endrika.
Momba ny fonosana (20" ft container) (Ho an'ny Reference Ihany)
(Ho fanondroana ihany)
teo aloha: White Calacatta quartz ( Item No.: Apex 8829)
Manaraka: Ny tombony azonay vato quartz super fotsy APEX-6608 (VOKATRA MAZAVA)
Fomba vaovao Injeniera mora ho an'ny famolavolana atitany...
Carrara Gray Vein Color Quartz Stone, Quartz Top...
Amidy tsara indrindra loko maro loko volontany quar...
CARRARA vato Quartz Kitchen Island Table Desig...
Kafe volontsôkôlà quartz countertop APEX-5330
Vato quartz calacatta mainty artifisialy misy w...
Quartz Countertops Slabs Vato Quartz Gray Countertops Quartz marika tsara indrindra Tsena Stone Engineered Vidin'ny Quartz Countertops Vidin'ny marbra Quartz